Indlela engcono yeBen Franklin yokususa 'abaMongameli' abaMongameli
Inkqubo yokuphambuka kwi-Rhulumente wase-US yaphakanyiswa okokuqala nguBenjamin Franklin ngexesha loMgaqo - siseko we- Constitution. Ngo-1787. Ukuqaphela ukuba indlela yokususa abaphathi abaziintloko "njengabalawuli" - njengabaokumkani-abavela emagunyeni babulawa, uFranklin wancenga ukuba indlela engqiqo kunye nekhethwayo.
Uphulo loMongameli lube yinto yokugqibela oya kucinga ukuba yenzeke eMelika.
Enyanisweni, ukususela ngowe-1841, ngaphezu kweyesithathu kwezo zonke iiMongameli zaseMerika ziye zafa eofisini, zakhubazeka, okanye zayeka. Nangona kunjalo, akukho mongameli waseMerika oye waphoqelelwa kwiofisi ngenxa yokuphambuka.
Ngamaxesha amane kuphela kwimbali yethu, iCongress ithathe iingxoxo ezinzulu zokwaphulwa komongameli:
U-Andrew Johnson wayengenakuphikiswa xa iCongress yayingenakuvuyela indlela awayejongene ngayo neminye imibandela yezoMkhosi, kodwa uJohnson wahlulwa kwi-Senate ngevoti enye waza wahlala eofisini.
ICongress yazisa isisombululo sokunyusa uJohn Tyler malunga nemicimbi yamalungelo karhulumente, kodwa isisombululo sahluleka.
ICongress yayiphikisana nokugxeka kwakhe kwi- Watergate break-when uMongameli uRichard Nixon wasula.
UWilliam J. Clinton wayexhaswe yiNdlu malunga neentlawulo zecala kunye nokuphazamiseka kobulungisa ngokuphathelele kwintsebenzo yakhe kunye noMnumzana we-White House ngaphakathi kuMonica Lewinsky . Ekugqibeleni uClinton wagxothwa yiSenate.
Inkqubo yokuphambanisa ibonakala kwiCongress kwaye idinga iivoti eziphambili kwiNdlu yabaBameli kunye neSeti . Ngokuqhelekileyo kuthiwa "iNdlu ye-Impeaches ne-Senate ityala," okanye ayikho. Eyona nto, iNdlu iqala ukugqiba ukuba kukho izizathu zokumisela umongameli, kwaye xa kunjalo, iNtloko yeSinate ibambe isilingo esicwangcisiweyo sokunyanzelisa.
IKomiti yeeNkundla zeeNkundla iQinisekisa ukuba ingaqhubekiyo okanye ayiyi kuqhubela phambili. Ukuba benza ...
Usihlalo weKomidi yoBulungiseleli uya kuphakamisa isisombululo sokuthi iKomidi leeNkundla liqalise uphando ngokusemthethweni malunga nompempo.
Ngokusekelwe kwimibuzo yabo, iKomidi yoBulungiseleli liya kuthumela esinye isisombululo esinequmrhu elilodwa okanye ngaphezulu "Iingxelo zeMpeachment" kwiNdlu epheleleyo echaza ukuba ukuchithwa kwempahla kulungile kwaye kutheni ukuba loo nto ingenziwanga.
INdlu epheleleyo (mhlawumbi isebenza phantsi kwemigaqo ekhethekileyo yomgangatho ebekwe yiKomiti yeMithetho yeNdlu) iza kuxoxisana kwaye ivote kwiSiqendu ngasinye se-Impeachment.
Ukuba kukho nawuphi na weeNqaku zeNtshutshiso kufuneka avunywe ngamavoti amaninzi alula, uMongameli uya kuba "angaphili." Nangona kunjalo, ukunyanzeliswa kuhlobo olufana nokutshutshiswa ngenxa yoluphulo-mthetho. UMongameli uya kuhlala e-ofisi esalindele isiphumo sovavanyo lweSeneti sokunyanzelisa.
Amagqabantshintshi afumaneka kwiNdlu.
I-Senate yakha imithetho kunye neenkqubo zokubamba ityala.
Ityala liya kubanjwa kunye nomongameli obelwe ngamagqwetha akhe. Iqela elikhethiweyo lelungu leNdlu likhonza "njengabatshutshisi." IJaji eliyiNtloko leNkundla ePhakamileyo (okwangoku uJohn G. Roberts ) ilawula onke amaSenamente angama-100 asebenza njengejaji.
I-Senate ihlangana ngeseshoni yangasese ukuxubusha isigwebo.
I-Senate, kwiseshoni evulekile, iivoti kwisigwebo. Ivoti ye-2/3 enkulu kakhulu yevoti yeSenate iya kubangela isigwebo.
I-Senate iya kuvota ukususa uMongameli kwi-ofisi.
I-Senate inokuvota (ngesininzi esilula) ukunqanda uMongameli ukuba athathe nayiphi na i-ofisi karhulumente kwixesha elizayo.
Xa izikhulu ezingenakuphikiswa zigwetywe kwi-Senate, ukususwa kwabo kwi-ofisi ku-othomathiki kwaye akunakufowunelwa. Kwimeko ka-1993 ye- Nixon v. United States , i- US iNkundla ePhakamileyo yenze isigwebo sokuba i-judicial judiciary ayikwazi ukuhlaziywa kwenkqubo yokuphambuka.
Kwinqanaba likarhulumente, ama-legislatures karhulumente angenza amagosa aseburhulumenteni amagosa, kuquka nabarhulumente, ngokuhambelana nemimiselo yabo yombuso.
Isiqendu II, Icandelo 4 loMgaqo-siseko lithi, "UMongameli, uMongameli, uMongameli kunye nawo onke amagosa aseburhulumenteni aseUnited States, uya kususwa kwi-Ofisi ye-Impeachment, kunye nokuQiniseka, ukuCalukisa, ukuKhoxwa, okanye ezinye iziTyala eziPhakamileyo kunye neziNdlobongela."
Kuze kube namhlanje, abagwebi ababini baseburhulumenteni baye bachithwa kwaye basuswe kwiofisi ngokubhekiselele kwiirhafu zokufumbathisa. Ayikho igosa elisemthethweni eliye lajamelana nokutshabalalisa ngokubhekiselele kwiintlawulo zokugwenxa. Zonke ezinye iinkqubo zokumangalelwa eziphathiswe kumagosa aseburhulumenteni, kubandakanywa nabongameli abathathu, sele zisekelwe kwiintlawulo " zobugebengu obuphezulu kunye nabangendawo ."
Ngokutsho koomthetho-mthetho, "Izigwenxa eziPhakamileyo kunye neziNdlobongelayo" (1) ubugebengu bokwenene-ukuphula umthetho; (2) ukusetyenziswa kakubi kwamandla; (3) "ukwephulwa kwetrasti karhulumente" njengoko kuchazwe nguAlexander Hamilton kwi- Papistist Papers . Ngo-1970, ngoko-ummeli uGerald R. Ford wachaza amatyala angenakufumaneka ngathi "nantoni na ininzi yeNdlu yabaMameli ibona ukuba ngexesha elithile kwimbali."
Ngokomlando, iNgqungquthela ikhuphe iziganeko ze-Impeachment malunga nezenzo ezintathu kwiindidi eziqhelekileyo:
Ukugqitywa kwemida yomgaqo-siseko yamagunya eofisi .
Indlela yokuziphatha engahambelani ngokupheleleyo nomsebenzi ofanelekileyo kunye nenjongo yeofisi.
Ukusebenzisa amandla eofisi ngenjongo engafanelekanga okanye ukuzuza.
Inkqubo yokuphambuka kwezopolitiko, kunokuba kubekho ulwaphulo-mthetho. I-Congress ayinamandla okunyanzelisa izigwebo zobugebengu kwizikhulu ezingekho phantsi. Kodwa inkundla yezobugebengu ingazama kwaye ijezise izikhulu ukuba zenze ubugebengu.
UJohn Tyler: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
AbaMongameli base-US abangenabo Iipolitiki
Indlela uMthi okhula ngayo kwaye uthuthuke
Ukuzivocavoca Isivakalisi-Ukulinganisa: Izivakalisi ezinzima
Indlela yokwenza iGoo
Indlela yokudada iViennese Waltz
Indlela yokugcina (i-Painless) I-Skydiving Logbook - I-Digitally
Ulwaphi ulwaphulo-mthetho lukaHubris kwiNkathazo yeGrike kunye noMthetho?